Rohingya Students Forum: March 2016
ရေးသူ : : အရှင် ပညာ
(30 -3- 2016)
အင်္ဂလိပ်အောက်၊ ကျွန်ဘဝ က
ပြည်နယ် ပြည်မ၊ ပေါင်းစည်းပြမှ
ညီညွတ်ကြမှ၊ အတူ တကွ
လွတ်လပ်ရေးကို၊ ပေးမယ်တဲ့ ။
ကားစုတ်တစ်စီး၊ အတူ စီးပြီး
မောရှမ်း ပြည်နယ်၊ လှည့်ကာသွားကာ
ဗမာ တစ်ကျပ်၊ ရှမ်း တစ်ကျပ်
သာတူညီမျှ၊ အေးချမ်း သာယာ
ပြည်နယ် တစ်မတ်၊ ပြည်မ တစ်မတ်
တို့ အားလုံးသည်၊ ဘာသာရေး နှင့်
သွေးစည်းကြမည်၊ လူမျိုးရေး နှင့်
ပေါင်းစည်း ကြမည်၊ ပင်လုံ စိတ်ဓါတ်
ပင်လုံ သွေးစည်း၊ ပင်လုံ အမျိုးသားရေး။
ဦးရာဇတ် အမျိုးသားရေး
ဗိုလ်ချုပ် အမှာစကား၊ ကိုရာဇတ်ရေ
မြို့ မ ကျောင်း တွေ
ဖွင့်ချင်တယ်ဗျာ၊ ဘယ်လို လုပ်မလဲ
ကြံစမ်းပါအုံ လုပ်ကြပါအုံး ။
အင်္ဂလိပ် စာတတ်၊ လူရာဝင် သလို
ဗမာ စာတတ်၊ လူရာ မြောက်အောင်
ဗျည်း ၃၃ လုံး၊ မင်္ဂလာသုတ်
မြေဝိုင်း မြေလွတ်၊ အလှု ခံပြီး
သခင်မျိူးဟေ့၊ တို့ မပါကို
သခင် မျိုးဟေ့၊ တို့ ဗမာ ဖြစ်အောင်
မူဆလင်ကြီး ကိုရာဇတ်ပါ ။
မြို မကျောင်း ။
တိုင်းရင်းသား တည်း ။
မြို့မ စိတ်ဓါတ် ။
အမျိူးသား စိတ်ဓါတ်
မျြို့မ စိတ်ဓါတ် ။
မြို့ မ ကျောင်းတည်း ။
ပင်လုံ အမျိုးသားရေး နှင့်
Posted by Rohang king at 10:38 AM
Labels: poem, well-known, သုတ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နိုင်ငံတော်ကို ထိုးနှက်နေသော အဝကျွန်းသားများ
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဒေသခံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား နှင့် အဝကျွန်းသားရခိုင် ဟူ၍ လူမျိုးနှစ်မျိုးရှိသည်။ အဝကျွန်း သားများသည် ယခင်က အရှေ့ပါကိစ္စတန်(ယခု ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ)တွင် နေထိုင်သည့် ရခိုင်များကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး ဒေသခံရခိုင်ဟူသည် မြန်မာနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အတွင်း လွတ်လပ်ရေး မရခင်ကတည်းက မှီတင်းနေထိုင်ကြသူများကို ခေါ်သည်။ (၂၀၁၀)ခုနှစ်အထိ အဝကျွန်းသား နှင့် ဒေသခံရခိုင်တို့ကြား တင်းမာမှုများ ရှိခဲ့သည်။ အဝကျွန်းသားများ သွားသည့် ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဒေသခံများ တက်ရောက်လေ့မရှိ၊ ပြုမူဆက်ဆံပုံနှင့် စရိုက်များလည်း မတူကြပေ။ ယခင်အရှေ့ပါကိစ္စတန်၌ ရခိုင် မာရမာ လူမျိုး(၃)သန်း နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီး သည့်အချိန်မှစ၍ တဖြည်းဖြည်း ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ စိမ့်ဝင်လာခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် (၁၉၇၄)တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဟူ၍ ဖြစ်လာသည့်အခါ အလုံးအရင်းဖြင့် ဝင်လာခဲ့ကြသည်။ ယခုအချိန်အထိ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး၊ လူနည်းစုအခွင့်အရေး အပြည့်အဝ ရယူခံစားနေကြသည့် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ် သန်းနီးပါး ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြသည်။
မဆလအစိုးရ လက်ထက်တွင် ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် ရခိုင်ကို အသုံးချခဲ့ သည်။ အဝကျွန်းသားဖြစ်သော ဗိုလ်မှူးသာကျော်၊ ဗိုလ်မှူးကျော်မောင် စသူတို့အား အခွင့်အရေးများ ပေးခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်အနှံ့၌လည်း အဝကျွန်းသားတို့၏ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်များစွာ နှင့် အဝကျွန်းသား ဘုန်းကြီးကျောင်းများစွာ ရှိသည်။ (၁၉၈၈)မှစ၍ အဝကျွန်းသား ရခိုင်များသည် အာဏာရှင် နအဖ နှင့် ပူးပေါင်း၍ မောင်ခိုလုပ်ခွင့်ရသည့်အတွက် ချမ်းသာကြွယ်ဝလာခဲ့သည်။ သိန်းစိန်အစိုးရ လက်ထက်တွင် သိန်းစိန်အစိုးရ နှင့် နားလည်မှုရရှိ၍ YW, ယာဘာဆေး နှင့် တခြားမူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးမျိုးကို ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျသို့ တင်သွင်းခွင့်ရရှိသည့်အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ အဝကျွန်းသားများသာ အချမ်းသာဆုံး၊ ဩဇာအရှိဆုံး ဖြစ်လာပြီး ဒေသခံများအနက်မှ ပညာတတ်တန်းအလွှာများ နှင့် အခြေခံလူတန်းစား နေ့လုပ်နေ့စား များသည် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို စွန့်ခွါ၍ ပြည်မသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာခဲ့ရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့အား တော်လှန်ရာတွင် ဗိုလ်ရန်နိုင်ကို ရခိုင်ဘက်သို့ လွှတ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ရန်နိုင် နှင့် အပေါင်းအပါများအား အဝကျွန်းသားတစ်ဦး ဦးဆောင်၍ မည်သို့ဒုက္ခပေးခဲ့သည်ကို သမိုင်းသိသူ တိုင်း သိကြမည်သာ။ ဒီမိုအရေး လှုပ်ရှားသူအားလုံးက အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရန် ရုန်းကန် လှုပ်ရှားလာသော်လည်း အဝကျွန်းသားများမှာ အာဏာရှင်များကိုသာ ဖက်တွယ်ထားကြသည်။ ယခုအခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ NLD က အပြတ်အသားအနိုင်ရရှိ၍ အစိုးရဖွဲ့ခွင့်ရသည့်အခါလည်း အဝကျွန်းသားများ ဦးဆောင်သည့် ANP က အာဏာရှင်ဘက် ရပ်တည်လျက် NLD ကိုအမျိုးမျိုး ဒုက္ခပေးနေသည်ကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တွေ့မြင်နေကြရပြီ။
အဝကျွန်းသားများ နှင့် ရခိုင်ပြည် ဖွံ့ဖြိုးမှု
အဝကျွန်းသားများကို တစ်စိုက်မတ်မတ် သွေးတိုးလှုံ့ဆော်နေကြသည့် ဂျပန်ရောက် ပြည်ပျက်အေးချမ်း နှင့် အမေရိကရောက် အဝကျွန်းသားတချို့က ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိသော အဝကျွန်းသားများကို အသုံးချ၍ မြန်မာနိုင်ငံ အား ပြိုကွဲရန် ကြံစည်နေကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ အေးချမ်းက ရခိုင်လူမျိုးကောင်းစားရေးအတွက် ဘာများလုပ်ပေးခဲ့ ပါသလဲ။ သူက ဂျပန်မှာ ဇိမ်နှင့်နေပြီး ငတ်ပြတ်နေသည့် ရခိုင်များကို သူ့အိပ်မှ ပိုက်ဆံတစ်ပြားပေးခဲ့ဖူးပါသလား။ အဝကျွန်းသားဒေါက်တာအေးမောင် အုပ်စုက ရခိုင်ပြည်သူအတွက် ဘာလုပ်ပေးခဲ့သလဲ။
(၂၀၁၀)မတိုင်ခင် နှင့် ယခု လက်ရှိအခြေအနေကို လေ့လာကြည့်ကြပါ။ ရခိုင်ပြည်သည် (၂၀၁၀)ထက် အဆပေါင်းမည်မျှ ဆင်းရဲမွဲပြာကျ သလဲ။ (၂၀၁၂)မှာ သိန်းစိန်အစိုးရ နှင့် ပေါင်းပြီး ရိုဟင်ဂျာများကို မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့် မည်သူအတွက် အကျိုးရှိ ခဲ့သလဲ။ အဝကျွန်းသား အေးမောင်တို့ အုပ်စုက ရန်ကုန်မှာ လုံးချင်းအိမ်ဝယ်ဖြစ်ခြင်းမှလွဲ၍ ရခိုင်ပြည် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာများဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ခဲ့သလဲ
(၂၀၁၂)မှစ၍ အဝကျွန်းသားတို့၏ လောဘကြောင့် အရက်သမား၊ ဆေး သမားများသာ တစ်ရက်ထက် တစ်ရက် တိုးများလာပြီး သာမန်လူတန်းစားများက အိမ်ခြံမြေကို ရောင်း၍ ရန်ကုန်မြို့ရှိ လှိုင်သာယာ၊ ဒဂုံဘက်သို့ ပြောင်းနေရပြီ။
မဆလ၏ မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကြောင့် (၁၉၇၀)မှစ၍ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ ကမ္ဘာအနှံ့ထွက်ပြေးနေရသည်။ "ကုလားဆို အခွင့်အရေးမပေးဘူး" ဟူသည်ကို လူတိုင်းသိကြသည်။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးကို ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီအဖြစ်ပြောင်း၍ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ရန် စနစ်တကျ စီစဉ်ခဲ့ကြသည်။ "ရိုဟင်ဂျာ"မရှိဘူးဟု ကြွေးကြော်သူများ ယောင်္ကျားမှန်လျှင် သတ္တိရှိရှိ အမှန်တရား ကို လက်ခံကြပါ။ အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျခြင်းကို သတ္တိလို့ မခေါ်ပါ။ အစိုးရပိုင် လဝကရုံးချုပ်၏ မှတ်တမ်းပေါင်းများစွာမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဟူသော စကားလုံးကို မပြနိုင်လျှင်ကျွန်တော်ကြိုးပေး ကွပ်မျက်မည်ကိုပါ ကြည်ဖြူစွာ လက်ခံပါမည်။ အမှန်တရားကို လက်ခံ ရဲသော ယောက်ျားမှန်လျှင် ယဉ်ကျေးသော လူပီပီ သက်ကြေးပေးလောင်းကြစို့လား။
မြန်မာနိုင်ငံထဲ့သို့ မည်သူ ခိုးဝင်လာပါသလဲ။
ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်များကို မဆလအစိုးရလက်ထက်မှစ၍ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်လာခဲ့သည်ကို အများသိပြီး ဖြစ်၏။ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးအစစ အရာရာတွင် လူသားမဆန်စွာ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားသော ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများက ရခိုင်ပြည်နယ်ကို စွန့်ခွါထွက်ပြေးနေသည်မှာ (၁၉၇၀)ဝန်းကျင်မှ စ၍ ယနေ့အထိပါ။
ဦးနှောက်အသိဉာဏ်ရှိသူတိုင်း ဝေဖန်ပိုင်ခြား သုံးသပ်နိုင်သောအချက်များ -
(၁) မည်သည့်ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံကိုမျှ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှ ခိုးဝင်လေ့မရှိ။
(၂) အဖိနှိပ်ခံရန် ငရဲဘုံသို့ ဝင်ရောက်မည့်လူသား ကမ္ဘာမှာမရှိ။
(၃) ရိုဟင်ဂျာကို ဘင်္ဂလီလုပ်ခြင်းဖြင့် ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ မြန်မာနိုင်ငံကို ပျက်စီးရန် ကြံစည်ခြင်း ဖြစ်သည်။
(၄) ဘာသာရေးကို အသုံးချ၍ ရိုဟင်ဂျာတို့အား လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်နေခြင်းသည် နိုင်ငံတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာသာမ က မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ အိုးမည်းသုတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
(၅) လက်နက်ကိုင် အဝကျွန်းသားများ နှင့် လက်နက်မဲ့ ငတ်ပြတ်နေသော ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များအနက် မည်သူက ပို၍ အန္တရာယ်ပေးနိုင်သနည်။
တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသားဟူသော စကားလုံးကို လူတိုင်း တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးလာကြသည်။ သို့သော် ထိုစကားလုံးများ၏ အနက်သဘောကို နားလည်သူ အလွန်ရှား၏။ မြန်မာစာပေ ဝေါဟာရကို နားမလည်ခြင်းလား၊ လူမိုက်လုပ်ခြင်းလား၊ ရိုင်းဆိုင်းမှုကို ယဉ်ကျေးမှုဟု ဖွင့်ဆိုခြင်းလား မသိ။ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရသည့်အချိန်မှစ ၍ ယနေ့အထိ မည်သူကမျှ ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသားပါဟု သက်သေခံကဒ်ပြား ပြနိုင်မည့်သူ မရှိ။ စီစစ် ရေးအဆင့်သာရှိသူက တခြားသူတစ်ယောက်အား နိုင်ငံသား၊ တိုင်းရင်းသား ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးခြင်းက ယုတ္တိရှိပါသလား။ သဘာဝကျပါသလား။ ယဉ်ကျေးမှုလား၊ မိုက်မဲမှုလား။ ဦးနှောက်ရှိသူတိုင်း သိကြသည်။
လူမျိုးဘာသာပေါ် အခြေခံသည့် နိုင်ငံများသည် နိုင်ငံတော်ဟု အခိုင်အမာ မထူထောင်နိုင်ကြပေ။ ဘာသာ ရေးကြောင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း ပျက်စီးခဲ့သည်ကို သဘောပေါက်သင့်ပြီ။ အရက်သမားတစ်ဦး သင်္ကန်းဝတ်ရုံဖြင့် ရှိ ခိုးရမည်ဟူသော အယူအဆ ပျောက်သင့်ပြီ။ နိုင်ငံတော်ကို ချစ်သူမှန်လျှင် အမျိုးဘာသာ သာသနာထက် နိုင်ငံတော် အကျိုးကို ဦးစားပေးကြပါ။ လူမျိုးတိုင်းက တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးပါဆိုပြီး နိုင်ငံတော်ကို စုတ်ဖြဲအောင် လုပ်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော် ထူထောင်နိုင်မည် မဟုတ်။
စင်္ကာပူကို နမူနာယူကြပါ။ အာဏာရှင်စနစ်ဖြင့် (၂၅)နှစ် အုပ်ချုပ်ရုံဖြင့် "ကျား"အဆင့်ရောက်သွားပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံတော် ထူထောင်မည့်အစား အာဏာရှင် အုပ်စုတစ်ခုကိုသာ အခိုင်အမာထူထောင်ထားသောကြောင့် သိသာထင်ရှားသည်။
နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်လိုလျှင် ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ပူးပေါင်း၍ လူမျိုးဘာသာသာသနာကို မိမိတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စအဖြစ်မှတ်ယူလျက် နိုင်ငံတော်အား အရှေ့တောင်အာရှ၌ ခွပ်ဒေါင်းအဆင့် အရောက်ပို့ပေးနိုင်မည့်သူများကိုအားပေးကြပါ။ အာဏာရှင်အုပ်စုတစ်ခု၏ ကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက်နိုင်ကြပါ
မှတ်ချက် ၊ ။ ဒီပိုစ်ကို Twitter အကောင့်ပိုင်ရှင် @Aungaungsittwe မှရေးသား
ပြီး ပုံတစ်ချို့ကို ဘင်္ဂလီအ၀ကျွန်းသား Tun Naing အကောင့်မှ
Posted by Rohang king at 1:18 AM
(Made in Allah)
Composed. By Rohang Lay
Hana sára cúndoijja asman,
gorom olá beil ar foór olá san,
jílimili gorédde tara ola asman,
hone banaiyé ?
Zobinor uore boyar, Ére aro miúla,
miúlat mazé zór, Ére nase bijili,
bijili cóçak ar comkani,
hone banayé hóo báfi?
Ceththá zobin, mur doriya,
zuar báça, usol usol faár,
honé banayé fan lar?
Hala rañga, gura burá
morod maiya, maincór zura,
sori há, uri há, dóri há dé janwar,
nanandhoilla lok fuk, mas doriyar,
hone banayé fán lar?
Kér kuñça, háil gas-hóla,
boro boro kul, hoto rong-or fúl,
hóro miçá roiccúa gula-gala,
honé banayé ?
Iín beggún jiníc oré,
Banai diyé Allah ye.
bicí boro mehérban Zibá,
furá kaainat ór maalek íba.
Íba yé fale beggún óre,
Razek sefati rizúk de.
Ówa mora íba hota.
Banoya báñgoya yó íba.
Íba ageyó aiccíl hámica ,
ehón ó asé couk sára,
sárme yó tákibou hámica.
1. aiccíl = ရှိခဲ့သည်။
2. ar = နှင့်။
3. asé = ရှိသည်။
4. asman = ကောင်းကင်။
5. báfi = စဉ်းစားပြီး။
6. banayé = ဖန်တီးခဲ့သည်။
7. Banoya = ဖန်တီးရှင်။
8. báñgoya = ပျက်စီးမည့်အရှင်။
9. beil = နေ။
10. bijili = လျှပ်ပြတ်စီးခြင်း။
11. burá = အိုးမင်းသူ။
12. Ceththá. = ပြားသော။
13. comkani = တောက်လင်းမှု။
14. couk = သံသယ။
15. cóçak = အလင်းတန်း။
16. cúndoijja = လှပသော။
17. de = ပေးသနားသည်။
18. dóri há = ဖမ်းစားသည့် (တိရစ္ဆာန်)။ တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်။
19. ehón = ယခု။
20. faár = တောင်တန်း။
21. fale = ကျွေးမွေးသည်။
22. fuk = ပိုးမွှား။
23. fúl = ပန်း။
24. gas hola = တောရုံ။
25. gula-gala = သစ်သီးဝလံ။
26. háil = စိမ်းလန်းစိုပြည်သော။
27. Hala = အမည်းရောင်။
28. hámica = ထာဝရ။
29. Hana = အပေါက်။
30. hone = မည်သူ။
31. hóro = ချဉ်သည်။
32. hota = စကား။ အမိန့်တော်။
33. Janwar = တိရစ္ဆာန်။
34. jílimili = တောက်ပသည်။
35. jiníc = အရာဝတ္တု။ အရာရာ။
36. kaainat = စကြာဝဠာ။
37. Kér = မြက်ပင်။
38. Kul = ကုန်းမြေ။
39. kuñça = လယ်ကွက်။
40. lok = လောက်။
41. maalek = ပိုင်ရှင်။
42. maiya = အမသဘာဝ။ မိန်းမ။
43. mas = ငါး။
44. mehérban = ကရုဏာရှင်။
45. miçá = ချိုသော။
46. miúla = မိုးတိမ်။
47. mora = သေခြင်းတရား။
48. morod = အထီးသဘာဝ။ ယောက်ျား။
49. nanandhoilla = အမျိုးမျိုး။
50. olá = ရှိသူ။ ပိုင်ဆိုင်သူ။
51. Ówa = မွေးခြင်း။
52. ranga = အသားဖြူဖွေးသော။
53. rizík. = ရိက္ခာ။
54. roiccúa = အရည်ရှိသော။
55. roñg = အရောင်။
56. san = လမင်း။
57. sára = မရှိ။ မရှိဘဲ။
58. sárme = အနာဂတ်။
59. sefati = ဂုဏ်တော်ရှင်။
60. sori há = ကျက်စားသော တိရစ္ဆာန်။
61. tara = ကြယ်ပွင့်။
62. tákibou = တည်ရှိမည်။
63. TOYARI = ဖန်တီးမှု
64. uri há = ပျံ့သန်း၍ အစားရှာသည်။
65. usol = မြင့်မားသော။
66. zobin = မြေပထဝီ။
67. zura = စုံတွဲ။
Posted by Rohang king at 11:03 AM
Written by Enamul Hyder
* No permission to come in and no greeting when go out.
* No fear to kick the owner and no shame when rob the things.
* No belief that has no money and no truth when decide the cases.
* No punishment for the killer and no jail when the owner die.
* Oh! The owner of doorless home, where has your door lost?
note: :I wrote above poem by representing the behaviors of our government, mainly police, tyler..etc.
Samsung ဖုန်း၏ လှို့ဝှက် ကုဒ်များအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ထိုကုဒ်သည် IMEI Numberကို ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။ IMEI Number သည် အတူမရှိသော စက်ရုံထုတ် နံပါတ်ဖြစ်သည်။ ထိုနံပါတ်ဖြင့် ပျောက်ဆုံးသွားသော ဖုန်းများကို ရှာဖွေခြင်း၊ ဖုန်းများကို lock unlock လုပ်နိုင်ခြင်းနှင့် အခြားသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ဤကုဒ်သည် အထွက် call phone number ကို ဖျောက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။အထူးသဖြင့် Hacker ကြီးများ အသုံးများပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် caller IDကို ဖျောက်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့် တစ်ဖက်က မည်သည့်နိုင်ငံ၊ မည်သူက ဆက်နေသည်ကို မသိနုင်ချေ။ Private Number သာပေါ်ပါမည်။
ဤ ကုဒ်ကိုနိုပ်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုသည့် ခလုတ်ကို နိုပ်လိုက်ပါက call forwarding setting ကို ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။
Code 4: *#30# ( Checks incoming caller ID setting )
ဤ ကုဒ်ကိုနိုပ်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုသည့် ခလုတ်ကို နိုပ်လိုက်ပါက Incoming caller ID setting ကို ဖော်ပြနေမည်ဖြစ်သည်။
Code 5: *#31# ( Checks outgoing caller ID setting )
ဤ ကုဒ်ကိုနိုပ်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုသည့် ခလုတ်ကို နိုပ်လိုက်ပါက Outgoing caller ID setting ကို ဖော်ပြနေမည်ဖြစ်သည်။
Code 6: *#0*# (Openaservice menu)
ဤကုဒ်ကိုနိုပ်လိုက်သောအခါ ဖုန်းကိုစစ်ဆေးပေးနိုင်မည့် Service Menu ကျလာမည်ဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးချင်သည့် service ကို စစ်ဆေးပြီးပါက Back key ကို နှစ်ကြိမ်နိုပ်ပြီး ပြန်ထွက်နိုင်ပါတယ်။
Code 7: *#7353# ( Open A Service Menu List)
ဤကုဒ်သည်လည်း Service Menu ကိုဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Service Menu ကို List ပုံစံဖြင့် ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Code 8: *#0782# (Show The Time )
ဤ ကုဒ်သည် အချိန်ကို ဖော်ပြပေးမည့်ကုဒ်ဖြစ်သည်။
ဤကုဒ်သည် call logs, phone internal Space, SD card space, Number of contacts massages စသည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။
Google App ၏ အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပေးနိုင်မည့် ကုဒ်ဖြစ်သည်။
Code 11: *#7465625# (Open the Sim lock menu)
ဤကုဒ်ကိုနိုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ဖုန်းသည် lock ဖြစ်နေသည် မဖြစ်နေသည် စသည့် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပေးမည် ဖြစ်သည်။ Menu တွင် အကုန်လုံးတွင် OFF ဖြစ်နေပါက Unlock ဖုန်းဖြစ်ပြီး ON ဖြစ်နေပါက ဖုန်းသည် locked ဖြစ်နေသည်။
ဤကုဒ်ကို ရိုက်ထည့်လိုက်သောအခါ ဖုန်း၏ light Sensor ကို စစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်ပြီး Light sensor သည် ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်ပါက Level 1ဟု ပြန်လည်ဖော်ပြပေးမည်။(level 1 နေရာတွင် အခြားတစ်ခုခုလည်း ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။)
Code 13: *#*#7594#*#* (Power of your Phone Without Confirmation)
ဒီကုဒ်ကတော့ power button ကို ကြာမြင့်စွာ နိုပ်ပြီး မပိတ်ချင်သူများအတွက် အဆိုပါကုဒ်ကို ရိုက်ထည့်လိုက်တာနှင့် အတည်ပြုချက် မတောင်းခံဘဲ ချက်ချင်း ဖုန်းကို Power Off လုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။